Kutengesa pamusika wemasheya kubva paInternet, asi uine vimbiso | Ehupfumi Zvemari
Kutengesa pamusika wemasheya kubva paInternet, asi uine vimbiso
Iyo Internet rave chishandiso chine simba chekuita mari. Mashandiro ayo anowedzerana uye chero nguva yezuva, kunyangwe husiku uye pakupera kwevhiki. Asi zvakare ndezvekuti, muzviitiko zvakawanda, zvinoreva chakakosha mari inoponesa kuburikidza nemari yayo uye makomisheni. Kusvika padanho rekuti chikamu chinowedzera kukosha chevashambadzi vadiki nepakati vanoita mafambiro avo mumisika yequity mu online fomati. Kubva pakombuta yako wega, nharembozha kana piritsi uye kubva chero kwauri paunenge uchiwedzera mari yako mumusika wemasheya.
Chero zvazvingaitika, vashandisi vemusika wemasheya havazove nesarudzo kunze kwekutora nhevedzano yezviito kuitira kuti mashandiro emusika wekutengesa aitwe pasi pematanho ekuchengetedza. Hazvishamisi kuti ivo vanogona kuve vanyajambwa ve cybercriminals izvo zvinogona kukuvadza zvakanyanya zvido zvavo zvehupfumi. Pasina kutaura nezvezvitsotsi izvo zvinogona kuve zviri zvemapuratifomu emari kana mabara anogona kuvanyengera chero nguva. Ndiyo imwe yenjodzi huru dzinogadzirwa nekushandisa kweInternet kupinda mune zvinogara zvakaoma chikamu kubva muhomwe.
Kubva pane akajairika mamiriro, National Securities Market Commission (CNMV) yakagadzira akateedzana matipi kuitira kuti kushandiswa kweInternet kugutse kune vese vashandisi. Pfungwa yekutanga ndeyekuti muridzi wemari anofanira kuona pamusoro pezvose izvo chinopa sevhisi iri chaizvo yakanyoreswa neCNMV. Nekuti mune ino pfungwa, zvinofanirwa kuyeukwa kuti kushanda nezvinhu zvisina kunyoreswa kunosiya muzvinashawo mumamiriro ekushomeka kwekudzivirira. Ose ari maviri kubva kunongedzo yekuona uye izvo zvakabatana nechero mari yako.
1 Internet: matanho
2 Dzivisa kupa zviyeuchidzo nezve mashandiro
3 Kubiridzira mumusika wemasheya
4 Imwe njodzi: kutsausa zvinopihwa
5 Nzira dzekutaurirana nemutengi
6 Ngwarira zvinopihwa zvinoyevedza
Kuti ushandise kuburikidza nekodhi yekutaurirana, zvinodikanwa kutora akateedzana ekudzivirira kuitira kuti mari dzigadziriswe nemazvo uye mushandisi haakwanise kuve nezvimwe zvinoshamisa. Kuti udzivise iyi mamiriro mashoma kwazvo anodikanwa nevatengesi, hapana chinogona kuve nani pane kushandisa mamwe mafirita ayo achabatsira kwazvo kubva zvino zvichienda mberi.
Shall ongorora chigadzirwa kuti chibvumirano, uye kana chiri chekuchengetedzwa kwakataurirana. Uye zvakare, pachena kwechigadzirwa chinopihwa chichava chakakosha, pamwe nemikana yekutarisa mari kuburikidza nesarudzo yemari yakasarudzwa.
Dzivisa masangano anoshandisa hyperlinks Izvo zvinogona kutungamira kune ruzivo rwunoburitswa kunze kwechinyorwa, pasina yambiro inodiwa kana kujekeswa. Ichi chokwadi chatoita kuti varimi pachavo vapokana pamusoro penzvimbo iyo yavakatsvaga kuita mari yavo. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinogona kuvaendesa kune mamwe makero eboka rimwe chete rezvemari
Dzivisa kupa zviyeuchidzo nezve mashandiro
Izvo zvisina kukosha kukosha ndeyekuti iwe unofanirwa kuve unoshingairira zvikuru kuziva kuti ndeipi saiti iwe yauri kutengesa pamusika wemasheya kana zvimwe zvigadzirwa zvemari. Nekuti zvirokwazvo, shandisa kombiyuta yekunze Kuti utarise zviyero kana kuita mashandiro paInternet, unogona kusiya trace inogona kupa imwe chiratidzo kune wechitatu mapato. Mupfungwa iyi, zano rakanakisa kudzima kubva mundangariro dzechinhu chehunyanzvi chatiri kushandisa rese data pane izvo zvirimo zvakashanyirwa. Kusvika pamwero wekuti ivo vanokwanisa kuunganidzira urwu rudzi rweruzivo kuti ubatsirwe uye isu tisinganyatso kuziva.
Kune rimwe divi, kushanda pamusika wemasheya mhinduro yakanyanya iri kunyanya kuburikidza nekushandisa zvishandiso zvine chivimbo chedu chikuru. Kana zvisiri, zvichave zvirinani kunonoka kudyara kusvikira nguva irinani yasvika yekuzvigadzira zvakanaka. Ichi chidiki chidiki chisingafanirwe kuramba chakavigwa muzviito zvedu mukutsvaga chengetedzo huru mune ese marudzi emari mashandiro. Izvo hazvigone kukanganwika kuti imari yedu iyo isu tiri kubhejera uye mune ino pfungwa ivo havana kukodzera imprudence yechero mhando.
Kubiridzira mumusika wemasheya
Nekuda kwehunhu chaihwo hwekudyara kuburikidza neInternet, matanho ekudzivirira anofanirwa kuve akasimba kupfuura kusvika zvino. Imwe yenjodzi huru kune vanoita mari inouya kubva kune zvinonyengera izvo zvinoitirwa kukwezva varimi kuburikidza neemail emaema kana webhu akaomesesa. Nechinangwa chekukwezva meso ako uye kutora masevhisi aunopa.
Kunyangwe zvingashamisa zvinopfuura mudiki uye wepakati investor, runyerekupe rwenhema rwakapararira paInternet kana kuburikidza nemagariro enzvimbo. Iri zano rakatsauka iro rinopararira kuburikidza nemaforamu ekuchinjana stock kuona danho remushandisi pachezvake pahunhu hwaanoshuvira kutora chinzvimbo chero nguva. Iwe haufanire kuita makesi, nekuti iyo yekare sisitimu yekushatisa mutengo wemasheya. Nenjodzi yakakomba kune vanhu vanowana chiitiko ichi chisingafadzi zvine chekuita nemisika yemari.
Imwe njodzi: kutsausa zvinopihwa
Kubudikidza nematurusi ayo akasiyana, Internet ine akawanda mashandisiro mubazi rezvemari. Mune mazhinji ezviitiko izvi, iwe unomhanyisa njodzi yekuwira mumamiriro anonyadzisa anogona kukukanganisa zvakanyanya. Semuenzaniso, kufambiswa kwemhando dzakasiyana dzekupihwa na mabhawa emahombekombe zvemari (zvinhu zvisina kupihwa mvumo yekupa mabasa ekudyara). Mune izvo zvavanofunga kuti iwe unogona invest in some products for investment pasi pemamiriro ezvinhu anoita seanogutsa. Iko kunonyanya kushamisa irubatsiro rwepamusoro rwavanokupa kubva pakutanga.
Kune rimwe divi, iro ruzivo rwavanokupa iwe ungangoona yeapo neapo kubiridzira kupihwa kwakapasa mafirita na mitumbi yekutarisira. Nemhedzisiro isingatarisirwi mhedzisiro uye izvo zvinogona kutotungamira iwe kuti urasikirwe zvese kana chikamu chakanaka chemari yakadyarwa. Nechikonzero ichi, zvinokurudzirwa kuti usati waisa mari yako unounganidza ruzivo nezvekwakabva makambani aya ehunhu husina chokwadi. Nekuti mhedzisiro yacho inogona kuve yakaoma kwazvo pamari yako wega, sezvakaitika mumakore achangopfuura nemamwe emakambani anofungidzirwa anoitirwa kudyara.
Nzira dzekutaurirana nemutengi
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo zvaunofanira kufunga nezvazvo kubva zvino ndipo panowanikwa izvi zvinopihwa zvekudyara mumisika yemari. Zvakanaka, iyo email Iyo ndeimwe yemasisitimu akasarudzwa kuti ataure nevanogamuchira meseji yekushambadzira. Kuburikidza nekutumirwa zvisina tsarukano kwekupihwa uye kukwidziridzwa pamusika wemasheya zvisina kukumbirwa nevanogamuchira kana izvo zvisipo kana zvisiri pamutemo. Inokurudzirwa zvakanyanya kuti usapinda kune ino kirasi yemameseji ayo anogona kuumba zvinopfuura zvinopfuura matambudziko kune vanogamuchira.
Kune rimwe divi, hazvifanirwe kukanganikwa kuti vashandisi vanofanirwa, musimboti, kusavimba chero kupihwa kana ruzivo rwavasina kukumbira zvakajeka. Mupfungwa iyi, National Securities Market Commission inotsanangura kuti havafanirwe kudaro kanganisa maitiro aya ine zvine musoro kushambadza mameseji. Hazvishamisi kuti mumakore achangopfuura mapuratifomu ekudyara echinangwa chinokatyamadza anga achiwanda uye izvo zvinogona kukonzeresa kuti ubatwe nechero yeiyi tsika yekunyepedzera. Kana paine kusahadzika, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekutaurirana neNational Securities Market Commission.
Uye zvechokwadi haufanire kugashira kuita chero rudzi rwebasa mumisika yezvemari pasi pehunhu uhwu. Kuisa iyo yekare axiom iyo kudzivirira iri nani pane kurapa. Nekuti kwave nevashandisi vakawandisa avo mumakore achangopfuura vakapfuura nemamwe ezvinhu asingafadzi. Mune zvimwe zviitiko zvinotungamirira kukuparadzwa kune zvakafanana kana zvakafanana, varasikirwa nechikamu kana zvese zvavo zvemari. Pasina ivo kugona kuita chero chinhu kudzoreredza mari yavo. Chiitiko icho chaunofanirwa kudzivirira pamatambudziko ese.
Ngwarira zvinopihwa zvinoyevedza
Zvakare, pavanokupa iwe kufarira kwakanyanya kusarudzika, hauzove nesarudzo kunze kwekusahadzika chikumbiro. Iwe haufarire kukudziridza uye zvishoma zvaungaite kuzviisa mumaoko emuviri wevatariri. Hazvishamisi kuti hapana chigadzirwa chemari parizvino chinopa a 10% chimbadzo kana kutodarika danho iri remubhadharo. Icho chichava chiratidzo chekuti pane chimwe chinhu chinoshamisa mune kupihwa kwavanokumbira uye nekudaro haufanire kuzvigamuchira. Kunyanya nekuti iwe unotora njodzi huru nekuhaya kwavo.
Muzviitiko zvese, iwe unofanirwa kufunga kuti pakupera kwezuva iwe uri kubheja mari yako uye mupfungwa iyi matanho ese aunotora anozove mashoma. Iwe unofanirwa kusahadzika mamwe mapuratifomu asinga zadzikise izvo zvakakosha zvinodiwa kuti zvishande mumisika yemari. Nenjodzi yekupedzisira yekusara usina kana chinhu mushure mekuvandudza mari. Ehezve, haungave iwe wega wakasangana nemamiriro ezvinhu asingafadzi. Edza kusadzokorora nyaya yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kutengesa pamusika wemasheya kubva paInternet, asi uine vimbiso
Kubatsira kwaEndesa kwakangofanana neiko kwechisungo